OMC : Hokarohina ireo mpanely tsaho -
AccueilRaharaham-pirenenaOMC : Hokarohina ireo mpanely tsaho
Fanakorontanana ny filaminam-bahoaka, sy fanakorontanana saim-bahoaka no nisy omaly manoloana ny fanelezana tsaho sy vaovao tsy marina hoy ny OMC, ka enjehin’ ny lalàna izany, noho izany tsy hikely soroka ny eo anivon’ ny OMC hitady sy hampihatra ny lalàna amin’ireo izay nanaparitaka ireo tsaho mikasika ny fisiana andian’olona, izay nolazaina fa hanindrona ireo mpianatra. Nanao antso avo manoloana ny fampiasana ny tambazotra aterneto noho izany ny eo anivon’ny OMC, fa tsy hampiasa izany amin’ny ratsy satria tokoa dia efa misy ny lalàna velona manasazy ireo izay mihoa-pefy. Efa mandeha noho izany ny fikarohana, izay tanterahin’ny eo anivon’ ny mpitandro filaminana, tsy maintsy hentina eo anivon’ny fitsarana rahateo izay nanao ny ratsy. Manamafy rahateo moa ny teo anivon’ny OMC fa tsy mitombina velively ny fisiana mpanindrona amin’ny aretina pesta izany. Noho izany, ireo izay minia manaparitaka vaovao tsy marina dia efa hiharan’ny lalàna izy ireo, ny hany tokony hataon’ ireo izay mahita ny vaovao tsy marim-pototra ihany kosa dia tokony hilaza izany tsy fahamarinana izany.
Manoloana ny zava-misy anekhitriny, dia hisy ny fanatonana ny mpitandro filaminana eny anivon’ ny sekoly mba hampilamina ny fampianarana, ankilan’izay dia hisy ihany koa ny fizarana laharana eny anivon’ny sekoly ahafan’izy ireo mifampizara vaovao sy mba handehanan’ny fampianarana araka ny tokony ho izy. Noho izany dia manana anjara ny vahoaka sy ny mponina rehetra amin’ny fampanjakana ny fandriam-pahaelmana sy ny fitoniana , mba ho tombontsoan’ny rehetra. Ankilany tokony hisy ihany koa ny fifampitaizana eo amin’ny mpiara-monina , satria dia hiaraha-mahalala ihany ny fisian’ny tsaho noho ny fivoaran’ny teknolojia. Ankilany anefa amin’ izao vaninandro iainantsika izao dia tsy dia miafina intsony ny ratsy, na io eo amin’ny fiarahamonina, na io fanahy iniana hanakorontanana fotsiny ihany. Rariny noho izany raha toa ka hisy ny fanomezana fahefana ny fokontany mba ahafahana mandamina ny fiarahamonina.